Ibhola OL - OL: URafael uthengise lo busika, uLyon waklebhula isivumelwano! - I-Olympique Lyonnais - I-FOOT 01 - I-T mov RELAY
Ibhola OL - OL: URafael uthengise lo busika, uLyon waklebhula isivumelwano! - I-Olympique Lyonnais - I-FOOT 01
Ukufa kukaKobe Bryant: lesi sivumelwano nonkosikazi wakhe uVanessa o…
I-India: UPak kumele athathe izinyathelo ezibonakalayo ngokumelene namaqembu…
RTL Kusasa kwe-28 January 2020 - VIDEO
Cha. I-3 esigabeni sabaphathi basemuva kwesokudla eLyon, uRafael njengamanje uthatha ithuba lokulimala kukaLéo Dubois ukuthola isikhathi sokudlala enhlokodolobha yaseGaul.
Noma kunjalo, ngenxa yesimo sakhe, iBrazil ihlose ukupakisha izikhwama zayo ewindini lokudlulisa lasebusika. Impela, Ibhola laseFrance lisitshela ekuqaleni kwaleli sonto ukuthi uRafael, okungamawele wakhe uFabio uvela eNantes, kuxoxiswane naye ngokudluliselwa kwamaCanaries emasontweni adlule. Isivumelwano satholakala ngisho phakathi kweLyon, iFC Nantes kanye nomvikeli ofanele weminyaka ye-29. Kepha ukulimala kwe-meniscus kaLeo Dubois, okuzobe kuphume phakathi kwe-3 neye-4 izinyanga, sekuguqukile umdlalo. Futhi ukusuka akusekho ku-ajenda phakathi kwabenzi bezinqumo uLyon.
Ukushayisana kweklabhu ye-canary, okuzibonele sekumukele umvikeli oqinile wesipiliyoni seminyaka emihlanu eManchester United neminyaka emihlanu e-Olympique Lyonnais. Kepha uJean-Michel Aulas noJuninho banayo "Bonke bama ukuze ekugcineni bagcine uRafael ukuze akwazi ukufaka uLeo Dubois, umlando wokungabi nomgodi kubasebenzi". Kusazobonakala ukuthi ngabe leli threkhi lizophinda lisebenze kabusha ehlobo elizayo, ngemuva kokubuya kokulimala kukaLéo Dubois. Njengesikhumbuzo, uRafael usenkontilekeni ne-Olympique Lyonnais kuze kube nguJuni 2021, ngemuva kokwelula ukuqasha kwakhe ngoMeyi wokugcina, yize bekhona abanye abadlali ababili esikhundleni sakhe.
TELES RELAY 13807 izikhala 0 amazwana
AbakwaDisney + bangaqeda ngo-2019 ngenombolo ekhangayo yababhalisile abayizigidi ezingama-20
Yini iGoogle Adsense, futhi noma ngubani ofuna i-youtube ufuna yonke into? - IVIDEO
Ukufa kukaKobe Bryant: lesi sivumelwano nomkakhe uVanessa esindise impilo yakhe
I-India: UPak kumele athathe izinyathelo ezibonakalayo zokulwa namaqembu amaphekula:
UkuQothulwa Kwesizwe ku-Instagram, ochungechungeni lweziqephu ezingama-70 - i-VIDEO
Izicubu zeMichel: kungani kufanele usheshe ufike ngokushesha -…
I-Samsung Galaxy S9 ngeke ibe ne-Android 10 ngaphambi kukaMashi -…
I-PSG yonyawo - i-PSG: Ungakhathazeki ngeParis, kuzolunga…
NgoKhisimusi, uNick Jonas wanikeza isipho esihle kakhulu kuPrayanka…
Izingoma zeMichel: Izikhiye ezi-3 zokubuyisa ukuzethemba - VIDEO
Iphephandaba le-8 likaDisemba 27 2019 - VIDEO
I-Transfer Talk: I-Arsenal neMan Utd balwela uKulusevski
I-India: Pakistan ukuvula ithempeli likaPanj Tirath…
UMessi Magic usindisa i-Barcelona isikhathi esisodwa